07 / 09 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: စက်တင်ဘာလ72019
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu 24 နာရီအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလကတိပေးကြောင်းလုပ်ရပ်များကနေစတင်ခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲကာလ။ အထူးကြပ်မတ်လေ့လာမှုများအထဲကတစ်ခုရလဒ်အဖြစ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးမြေအောက်ရထားလိုင်းများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအချိန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားလိုင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ [ပို ... ]
Egirdir ဘူတာ Continues ၏သမိုင်းအတွက်လေ့လာစရာများ
ဘိန်းဘုရင် The Opium TCDD7။ ဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာကိုအာဒံ Spinning Sharp ကနှင့်သူ၏ပူးတွဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုသည်မြို့တော်ဝန် Veli မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုအာဏာပိုင်သွားရောက်ခဲ့ပြီးခရိုင်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မိဘများသည်မြို့တော်ဝန်ဟန့်တား, ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးထောက်ပြ, မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုသွားရောက်လည်ပတ်သူကိုရုံးအတွက်မြို့တော်ဝန် spinning နေကြတယ် [ပို ... ]
Karabükအထူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး Keltepe နှင်းလျှောစီးကတ္တရာအလုပ်ကိုဆက်လက်လမ်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ကတ္တရာပူပြင်းတဲ့ကတ္တရာ၏လုပျငနျးကြည့်ရှုအားပေးသူကိုKarabükအထူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mehmet Uzun, အလုပ်လုပ်မှစတင်ခဲ့သည်။ Keltepe သည့်နှင်းလျှောစီးစင်တာဆီသို့ဆက်လက် [ပို ... ]
Bursa T2 အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကိုအပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆက်လက်။ terminal ကိုလမ်းရထားလိုင်းကိုအပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အပြည့်အဝလွှဲများတွင်ဆက်လက် - ဤတွင် T2 လမ်းရထားလိုင်းကိုရပ် ... Bursa Bursa T2 မြို့ရင်ပြင်အကောင်အထည်ဖော်။ အစ္စတန်ဘူလ်လမ်းဖြတ်သန်းသောလိုင်း [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen ၏စက်လုပ်သမားကို ပို. အရေးကြီးသောမကျေနပ်မှုသည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူဖြေရှင်းခဲ့သည်။ input ကိုမီးရထားပေးရန်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြောင့်အသွားအလာသိပ်သည်းဆ - က Izmir Halkapınar (Balikesir, အစ္စတန်ဘူလ်, အစ္စတန်ဘူလ်Halkapınar Tank) မှလူသိများသည်နှင့်အမျှ [ပို ... ]
သြဂုတ်လ 23 အတွက် Air လေကြောင်းလိုင်းခရီးသည်များအရေအတွက်သန်းကျော်လွန်
ပြည်နယ်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, 2019 နှစ်ပေါင်း 8 ယခုနှစ်လ, သြဂုတ်လနှင့်လေကြောင်းလိုင်းပိုင်လေယာဉ်များအတွက်၎င်း၏ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးစာရင်းဇယားကြေညာခဲ့သည်။ ဒေတာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေကြောင်း "ဦးဆောင်ကဏ္ဍ" ဟုသူကတူရကီရဲ့မကျြနှာကို flux ဖြစ်ဆက်လက်အဖြစ် [ပို ... ]
Bursa မော်ဒယ်စက်ရုံအတွက်အတူတကွပိန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူသူတိုးမြှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်အရည်အသွေးများကိုစိတ်ကူးကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (BCCI), စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လေ့ကျင့်စတင်ခဲ့သည်။ BCCI, စက်မှုနှင့်ယူနိုက်တက်၏နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအသုံးညွှန်ကြားမှုအထွေထွေအားဖြင့် [ပို ... ]
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager Erol Arikan နှင့် TULOMSAS မှ General Manager Hayri Avci ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းနှစ်လုံးTÜLOMSAŞမော်တော်ယာဉ်ရေတပ်များ၏ခေတ်မီအစီအစဉ်၏အခြေအနေတွင်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်။ အစည်းအဝေးတွင် 2020-2022 ကာလလျှပ်စစ်စက်ခေါင်း, ဒီဇယ်အမျိုးမျိုးအမျိုးအစားဒီဇယ်စက်ခေါင်းမှပြောင်းလဲစေမည်အကြောင်း, [ပို ... ]
မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အခြေအနေတွင် Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်,9အသစ်များကိုပညာသင်နှစ်စက်တင်ဘာလအသစ်တစ်ခုအစီအစဉ်ကို လုပ်. , တနင်္လာနေ့တွင်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးဘတ်စ်ကားများလူများကအပိုဆောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်, လယ်ပြင်ပေါ်တွင်ရှိလိမ့်မည်။ မြို့တော်မြူနီစီပယ်သစ်ကျောင်းမှ [ပို ... ]
ကြည်းတပ်အတွက် Cruise နဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်ပြင်ဆင်မှု
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mehmet Hilmi Guler, ကြည်းတပ်, ပင်လယ်နှင့်အတူရေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများပွနျလညျသငျ့မွ၏ပြန်လည်ရှင်သန်မှုသေချာစေရန်မပြတ်မတောက်အလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသမ္မတ Gul သူတို့ကတပ်မတော်ဖို့ခရုဇ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအားငါပေးမည်ဖော်ပြထားသည်, "တပ်မတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောထဲ၌တည်လိုအပ်ပါသည်။ တပ်မတော် [ပို ... ]
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ပိုမိုချောမွေ့စွာနဲ့လုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်မြို့တော်တဝိုက်သစ်ကိုလမ်း, ကတ္တရာလုပျငနျးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်လမ်းဆုံအပေါ်မပြတ်မတောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ မြို့တော်ရဲ့အထင်ကရအဆောက်အအပေါ်အသွားအလာမှသက်သာရာရစေရန်5လမ်းဆုံဉမင်လိုဏ်ခေါင်း [ပို ... ]
Sakarya အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်တန်းကာလ Arrangement
အသစ်ကပညာသင်နှစ်တွင်စတင်မည်မတိုင်မီတနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ9တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်သမ္မတဖြင့်အစီအစဉ်များကြေညာခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, 1 အဆိုပါစည်ပင်သာယာဘတ်စ်ကားထွက်ခွာအချိန်ဆောင်းတွင်းစာသင် application ကို, 4, 19, 21, [ပို ... ]
ဆောင်းရာသီကာလများတွင် Kocaeli အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစတင်
affiliates ulaşımpark Inc. မှ Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစက်တင်ဘာလ92019 တနင်္လာနေ့ကနေထိရောက်သောဆောင်းရာသီမှာအချိန်ဇယားမှတဆင့်သွားဘတ်စ်ကားနှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင်နေဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ulaşımparkဖြင့်ကြေညာချက်; ကျောင်းဖွင့်ပွဲနှင့်အတူကြုံတွေ့နိုင်ပြင်းထန်မှု, အနိမ့်ဆုံးသိပ်သည်းဆစဉ်းစား [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ulaşımpark Inc က အဆိုပါရာသီအလိုက်တစ်စက်လိုင်းများ, 800 800 စက်တင်ဘာလကြီးစွန်းနေဖြင့် 8C ။ တနင်္ဂနွေ 800, code ကိုရက်အတူကုဒ်၏ 800C လိုင်း, နိုင်ငံသားများအပြာအလံကမ်းခြေ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးဘတ်စ်ကားနှင့်အတူစက်တင်ဘာလ 800 အတွက်နောက်ဆုံးအချိန် 8CK [ပို ... ]
Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတသောတိုင်းမ် xnumx'inc ဖွင့်လှစ်; "ကမ္ဘာ့" Izmir အတွက်တီထွင်မှုခဲ့သည်
ယင်းဆောင်ပုဒ်အောက်တွင်ဒီနှစ်ကျင်းပ "ကျနော်တို့ Fuard" Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတသောတစ်ဦးခမ်းနားအခမ်းအနားနှင့်အတူ၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ် xnumx'inci ။ ရီပတ်ဘလီကန်ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌ Kemal Kılıçdaroğlu, ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Ruhsar Pekcan, အစ္စတန်ဘူလ်အားဖြင့်တည်ခင်းဧည် Izmir မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer ရဲ့အခမ်းအနား [ပို ... ]
ပိုးလမ်းမကြီးအဆိုပြုချက်၏အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲ၏ပြည်ထောင်စု Soyer နိုင်ငံတော်သမ္မတ
Izmir, တရုတ်သံအမတ်ကြီး Li ကတိန့်ရှောင်၏ Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတသော Partner နိုင်ငံပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသွားရောက်လည်ပတ်အတိုင်းအတာ xnumx'inc, သူ့ရုံးခန်းထဲမှာ Izmir မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer သွားရောက်ခဲ့သည်။ သံအမတ်ကြီး Li က Deng သမ္မတဦးဆောင်သောတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ [ပို ... ]
Frankfurt အတွက် receiver ဖျော်ဖြေ Ford ကား Puma တိုက်တေနီယမ်က X
ဂျာမဏီ 2019 အတွက် Frankfurt Motor Show မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်လာရောက်လည်ပတ်သူရန်၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်လတံ့သော Ford ကားလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်း, သစ်ကို Ford ကား Puma သည့်တိုက်တေနီယမ် X ကိုမော်ဒယ်များမိတ်ဆက်အများပြည်သူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ အသစ်က crossover SUV ကားကနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးအသစ်တိုက်တေနီယမ် X ကို Puma, Puma [ပို ... ]
ချိတ်ဆက်မှုအတှကျအ Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲဖွင့်လှစ်တံခါး
ရှေ့ဆောင်နည်းပညာများ, MasterCard ၏ငွေပေးချေမှုရမည့်တူရကီ Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲများတွင် 2016 16 မြို့ကြီးများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဧရိယာမှပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်အဆိုပါပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက် MasterCard ကိုချိတ်ဆက် applications များနှစ်တွင်တူရကီအတွက်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Mastercard, Karbil နှင့် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ileizm ဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
ဆောင်းရာသီကာလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Izmir အတွက်စတင်
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်ကျောင်းနွေရာသီအားလပ်ရက်၏အဆုံးနှင့်အတူကိုလည်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဆောင်းရာသီကာလအချိန်ဇယားတတ်၏။ တနင်္လာနေ့, ဘတ်စ်ကားနှင့်ရထားလမ်းန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်စက်တင်ဘာလ9သစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အထွတ်အထိပ်နာရီစဉ်အတွင်းမြေအောက်ရထားပေါ်တွင်အချိန် [ပို ... ]
သမိုင်းစက်တင်ဘာလ71871 Haydarpasa-အစ္စတန်ဘူလ်ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းလေလံအတွက်ယနေ့ခေါငျးလိုင်းနှင့်လှည်းစေမည်ဖြစ်သောဘယ်လဂျီယံကုမ္ပဏီတခုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။7စက်တင်ဘာလ 1939 ဥရောပရထားလမ်းအသွားအလာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလအတွင်း7စက်တင်ဘာလ 2011 အချိန်နှစ်စဉ် [ပို ... ]